धिक्कार ! छ यस्ता सन्तानलाई, मन छुने कथा एकपटक अवस्य पढ्नुहोस | Success Open University
By sopenu | October 27, 2017
बस स्टेसनमा चिया बेच्ने एउटा केटाको नजर अचानक कुनै वृद्ध दम्पती माथी परेछ । उसले देख्यो कि त्यो वृद्ध पति ले आफ्नो पत्निको हात समातेर उनलाई सहारा दिदै हिडिरहेका थिए । थोरै टाढा गएर उनिहरु खाली ठाउँ देखेर बसेछन । कपडा लगाएको देखेर एकदमै गरीब देखिन्थ्यो । केही बेर पछि चिया बेच्ने केटो आफ्नो काममा लाग्न थाल्यो ।
बेलुका जब त्यो चिया बेच्ने केटो आयो फेरि पनि उसले देख्यो कि ती वृद्ध दम्पत्ती अझै त्यही बसिरहेका थिए । उ अचम्ममा पर्यो । अबेर रातसम्म त्यो चिया बेच्ने केटोले उनिहरुलाई फेरि त्यही देख्दा केटो उनिहरुको छेउमा गयो र सोध्यो ” बुवा तपाई बिहान देखि यहाँ के गरीरहनुभएको छ , तपाइलाई जानू कहाँ छ ?
त्यो वृद्ध व्यक्तिले आफ्नो पकेटबाट एउटा कागज निकालेर त्यो केटालाई दियो र भन्यो ” छोरा हामी दुवैजना लाई पढ्न आउदैन । यो कागजमा मेरो ठूलो छोराको ठेगाना लेखिएको छ , र मेरो सानो छोराले भनेको थियो कि यदि दाजुले तपाइलाई लिन आएन भने कसैलाई पनि यो कागज पढ्न दिनु उसले ठेगाना भनिदिन्छ र सहि ठाउँ मा पुर्याइदिन्छ ।”
चिया बेच्ने केटोले उत्सुकतापुर्वक जब त्यो कागज खोलेर पढ्दा तब त्यसको त होस हवास नै उडेछ ।उसको आँखामा एकाएक आँसु को धारा बग्न थाल्यो ।
त्यो कागजमा लेखिएको थियो कि ” कृपया यी दुवैजनालाई शहरको कुनैपनि वृद्धआश्रममा भर्ती गरीदिनुहोला , धेरै धेरै आभारी हुनेछु । ”
साथीहरु धिक्कार छ यस्तो सन्तानलाई , यो भन्दा राम्रो त निसन्तान हुनु नै राम्रो हुन्छ , यसलाई यती धेरै शेयर गर्नुस कि कोहि छोराहरुले पढ्यो भने तुरुन्त जागोस र पश्चात्ताप होस । यदि यो पोस्टले तपाइको दिललाई छोयो भने Like गर्नु आवश्यकता छैन तर Share अवस्य गरीदिनुस ।
– दिपक दर्शनको फेसबूक पेज The Way Of Success बाट ।
← बिहान उठेर यस्ताकुराहरू पढ्नुहोस, तपाईको पुरै दिन उत्साहपूर्ण हुनेछ नयाँ शक्ति पार्टीको नयाँ – नयाँ योजना, सगरमाथामा केबलकार पुर्याउने →